Mhete yeMoto: kuti chii, maitiro, chiitiko uye zvimwe zvakawanda | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 06/01/2022 10:00 | Geology
Panyika ino, dzimwe nzvimbo dzine njodzi kupfuura dzimwe, saka mazita enzvimbo idzi anonyanya kushamisa uye unogona kufunga kuti mazita aya anoreva zvinhu zvine njodzi. Munyaya iyi, tichataura nezvazvo Mhete yeMoto kubva kuPacific. Iri zita rinoreva nzvimbo yakatenderedza gungwa iri, uko kunoitika kudengenyeka kwenyika uye kuputika kwemakomo.
Muchikamu chino tichakuudza zvese zvaunoda kuziva nezve Mhete yeMoto, kwairi uye kuti ndeapi maitiro.
1 Chii chinonzi Mhete yeMoto
3 Chiitiko chekuputika kwegomo reRing of Fire
4 Nyika inopfuura nadziri
Chii chinonzi Mhete yeMoto
Munzvimbo iyi yakaita bhiza panzvimbo pedenderedzwa, nhamba huru yekudengenyeka kwenyika uye zviitiko zvekuputika kwemakomo zvakanyorwa. Izvi zvinoita kuti nzvimbo iyi iwedzere kuva nengozi nekuda kwenjodzi inogona kuitika. Iyi mhete inotambanudzira kubva kuNew Zealand kuenda kumahombekombe ese ekumadokero kweSouth America, nehurefu hwakakwana hwemakiromita anopfuura 40.000. Inoyambukawo mahombekombe egungwa eEast Asia neAlaska, ichipfuura nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweNorth neCentral America.
Sezvakataurwa muplate tectonics, bhandi iri rinoratidza kumucheto uko Pacific Plate inogarisana nemamwe mahwendefa etectonic anoita iyo inonzi crust. Senzvimbo inogara ichidengenyeka uye kuputika kwemakomo, inorondedzerwa senzvimbo ine ngozi.
Iyo Pacific Ring yeMoto inoumbwa nekufamba kwe tectonic plates. Mahwendefa haana kugadziriswa, asi anogara achifamba. Izvi zvinokonzerwa nekuvapo kwe convection mujasi. Musiyano mukuwanda kwezvinhu zvinoita kuti vafambe uye vanoita kuti tectonic plates ifambe. Nenzira iyi, kusimuka kwemasendimita mashoma pagore kunowanikwa. Hatina kuzviona pachiyero chevanhu, asi kana tikaongorora nguva ye geologic, inooneka.
Kwemamiriyoni emakore, kufamba kwemahwendefa aya kwakakonzera kuumbwa kwePacific Ring of Fire. Tectonic mahwendefa haana kunyatsobatanidzwa kune mumwe nemumwe, asi pane nzvimbo pakati pavo. Anowanzoita anenge makiromita makumi masere mukobvu uye anofamba ne convection mujasi rambotaurwa.
Kana mahwendefa aya achifamba, anoita kupatsanurwa uye kubonderana. Zvichienderana nehuwandu hweimwe neimwe, imwe inogona zvakare kunyura pamusoro peimwe. Semuenzaniso, kuwanda kwemapureti egungwa kwakakura kupfuura kweiyo continental plate. Nechikonzero ichi, panodhumhana ndiro mbiri, dzinonyura pamberi peimwe ndiro. Kufamba uku uye kubonderana kwemahwendefa kwakagadzira zviitiko zvakasimba zve geological pamicheto yemahwendefa. Naizvozvo, nzvimbo idzi dzinoonekwa zvakanyanya kushanda.
Iyo miganhu yeplate yatinowana:
Convergence limit. Mukati meiyi miganhu mune nzvimbo dzinodhumhana tectonic plates. Izvi zvinogona kuita kuti ndiro inorema idhumhane nendiro yakareruka. Nenzira iyi iyo inonzi subduction zone inoumbwa. Imwe ndiro inodonha pamusoro peimwe. Munzvimbo idzi munoitika izvi, mune makomo akawanda anoputika, nekuti kuderera uku kunoita kuti magma akwire nepakati penyika. Zviripachena, izvi hazvizoitiki nekanguva. Iyi inzira inotora mabhiriyoni emakore. Aya ndiwo magadzirirwo akaitwa volcanic arc.
Kuparadzanisa miganhu. Iwo akanyatsopesana nekusangana. Pakati pemahwendefa aya, mahwendefa ari mumamiriro ekuparadzana. Gore negore vanoparadzanisa zvishoma, vachigadzira nzvimbo itsva yegungwa.
Shanduko miganho. Muzvidziviriro izvi, mahwendefa haana kupatsanurwa kana kubatanidzwa, anongotsvedza achienderana kana kuchinjika.
Nzvimbo dzinopisa. Iwo matunhu umo tembiricha yejasi yakananga pasi peplate yakakwirira kupfuura mamwe matunhu. Mumamiriro ezvinhu aya, magma anopisa anogona kukwira kumusoro uye kuburitsa mamwe makomo anoputika.
Miganhu yeplate inoonekwa senzvimbo idzo geology uye basa rekuputika kwemakomo zvakamisikidzwa. Naizvozvo, zvakajairika kuti makomo anoputika akawanda uye kudengenyeka kwenyika zvakanangana muPacific Ring of Fire. Dambudziko nderokuti kudengenyeka kwenyika kunoitika mugungwa uye kunokonzera tsunami uye tsunami inoenderana. Mumamiriro ezvinhu aya, njodzi ichawedzera zvekuti inogona kukonzera njodzi senge iri muFukushima muna 2011.
Chiitiko chekuputika kwegomo reRing of Fire
Ungave wakaona kuti kuparadzirwa kwemakomo anoputika pasi pano hakuna kuenzana. Zvakapesana zvikuru. Iwo chikamu chenzvimbo yakakura ye geological chiitiko. Kana pasina chiitiko chakadaro, gomo racho haringavipo. Kudengenyeka kwenyika kunokonzerwa nekuunganidza uye kusunungurwa kwesimba pakati pemahwendefa. Kudengenyeka kwenyika uku kwakawanda munyika dzedu dzePacific Ring yeMoto.
Uye ndizvo here izvi Mhete yeMoto ndiyo inoisa 75% yemakomo anoputika epasi rose. 90% yekudengenyeka kwenyika kunoitikawo. Kune zvitsuwa zvisingaverengeki uye maarchipelagos pamwe chete, pamwe chete nemakomo anoputika akasiyana, ane kuputika kwechisimba. Makomo anoputika anowanikwawo zvakanyanya. Iwo macheni emakomo anoputika ari pamusoro pemapureti ekudzikisa.
Izvi zvinoita kuti vanhu vakawanda pasi rose vafadzwe nekuvhundutswa nenzvimbo iyi yemoto. Izvi zvinodaro nekuti simba rezviito zvavo rakakura uye rinogona kukonzera njodzi dzinongoitika dzoga.
Nyika inopfuura nadziri
Iyi yakakura tectonic cheni inotora nzvimbo ina huru: North America, Central America, South America, Asia, uye Oceania.
North America: Inomhanya ichitevedza mahombekombe ekumadokero kweMexico, United States, neCanada, ichienderera mberi ichienda kuAlaska, uye ichibatana neAsia muNorth Pacific.
Central America: inosanganisira matunhu ePanama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala neBelize.
América del Sur: Munharaunda iyi inofukidza dzinenge Chile yose uye zvikamu zveArgentina, Peru, Bolivia, Ecuador neColombia.
Asia: inovhara mahombekombe ekumabvazuva kweRussia uye inoenderera mberi kuburikidza nedzimwe nyika dzeAsia dzakadai seJapan, Philippines, Taiwan, Indonesia, Singapore neMalaysia.
Oceania: Solomon Islands, Tuvalu, Samoa neNew Zealand inyika dziri muOceania uko kune Ring of Fire.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve Pacific Ring yeMoto, basa rayo uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Geology » Mhete yeMoto
Makomo anoputika muIceland